Beer muhiimad ma leh… Maxaan dooranaa, jaangooyo si aan wax u cunno ama mashiinno oo aan cabno? | KONGOLISOLO
Posted By: KongoLisolowaa: July 15, 2017 00: 55 No Comments
Waxaan u maleynayaa inaan u baahannahay inaan marka hore quudino dadka. Ka dibna waxaan arki doonaa qadarka kuwa doonaya in ay cabbaan. Dhamaan Burkinabè ha cabin khamriga, laakiin dhammaantood waxay cunaan Burkinabè maalin kasta. Waxaa jiri doona beerka marka hore haddii ay dadku dhameeyaan cunadooda, marka labaadna waa inay ka soo baxaan masiixa Burkina.
Ma jiri karaa nidaam siyaasadeed oo culus sida walaaca ugu weyn ee cadowga dadka khamriga cabba?
Waxaa laga soo xigtey: Inga Nagel wareysi lagu daabacay Jeexa Afrique November 11 1987.
Laga soo bilaabo kalluunka INET illaa ICHTUS: qarnigii koowaad, astaamaha afrikannimo ee aflagaado u ah diinta cusub ee Masiixiyiinta ayaa soo ifbaxay dhowr jeer ...